ဤသို့ဤပုံ ကြော်ငြာကြလေကုန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဤသို့ဤပုံ ကြော်ငြာကြလေကုန်
ရတဲ့အခွင့်အရေးကို မရမက အသုံးချတဲ့နေရာမှာတော့ မြန်မာတွေက ဓလေ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ကိုဝါ၀ါရေ ….. ဖေဘုတ်ကအကောင့်ရှိပေမယ့် သိပ်တော့သူများလိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မသုံးတတ်ဘူး …. ကိုဝါ၀ါရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ တော်တော်ရီရပါတယ် …. ဟိုတစ်လောက စလုံးမှာသေသွားတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်အကြောင်းဆို ဖေ့ဘုတ်ကနေစုံထောက်လှမ်းပီး အစအဆုံးတောင်ပြောနေကြ လေရဲ့ ……..
ဖေ့ဘွတ်သည် ဇရပ်ကြီးနှင့်တူသည်။ ရေးချင်တာအားလုံးရေး။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကြော်ငြာ ကဲ fb ဘက်လစ်ပြီဗျို့